Kunwa vanonwa mvura → Kunwa matsime emvura • Kunwa matsime emvura
Isu tinopa vanonwa mvura yekunwa yeavo kudzidza, HoReCa indasitiri, hutano hwehutano, imba, mahofisi, nzvimbo dzeveruzhinji, mapaki, nzvimbo dzemitambo nevamwe vazhinji.
Kusimbiswa kwemhando kumwa mvura inyaya yekuyedza kwenzvimbo dzakawanda uye vanogadzira masisitimu anoshandiswa kurapwa kwemvura.
Iko kunwa mvura kunofanirwa kuve kusununguka kubva kune ese pathogenic microorganisms uye anokuvadza emagetsi uye anofanirwa kuve nekuravira kwakanaka.
Mhando yepamusoro yekumwa mvura inovimbisa magadzirirwo akakodzera, kuvaka uye kushandisa iyo mvura yekuwanira uye pombi yekusasa muchivako kana nzvimbo yemadhorobha uye kudzivirira kudzikisira kwemvura, tembiricha yacho haifanire kudarika 25 ° C.
Kunwa matsime emvura
Kana pane kukosha kwekupa mukana wekuwana mvura yekumwa kune nhamba huru yevanhu, zvakakodzera kutarisa mhinduro yazvino uye yakachengeteka, sekunwa matsime emvura.
Vakadai vanonwa zvigadzirwa zvehutsanana uye zviri nyore kushandisa izvo zvinopa kutonhora kana mukamuri tembiricha mvura uye yakanakira nzvimbo dzinoshandiswa nenhamba huru yevanhu. Mhinduro iyi yanga ichishandiswa kwenguva yakareba kune dzimwe nyika uye yakakwana pamahofisi, zvikoro, zvidyenzi zvemaindasitiri, zviteshi zvezvitima nenhandare dzendege, i.e. chero kupi nekudiwa kupi kwekupa mvura yekunwa kune mapoka makuru evanhu.
Panyaya yeCOVID-19 denda, tiri kushamisika kuti sei, maererano nemazano eSanepid uye nekutarisira hutano hwehuwandu, kugadzirisa dambudziko rekugutsa nyota yevanogara mumaguta emumaguta uye munzvimbo dzeveruzhinji nenzira yakachengeteka.
Onawo: Ruoko disinfection zviteshi uye Kurukisa masisitimu enzvimbo yekuuraya mishonga mumakamuri uchishandisa iyo yakaoma fog nzira
Kana isu tichitsvaga michina iri nyore uye nehutsanana kushandisa, uye zvakanyanya-isina maoko, makambani anogadzira vanonwa uye vanonwa mvura zvitubu vanouya kwatiri nemhinduro, iko kushandiswa uko kunozivisa hwakawanda hutsanana hwakadaro.
Kana uchisarudza chitubu chemvura yekunwa zvisinei, pane zvinhu zvishoma zvekucherechedza
Tinofungidzira, hongu, kuti mvura inoyerera kubva kumatepi edu ndeyemhando yakanaka kwazvo, iyo inogona kutsanangurwa zviri nyore nekuraira bvunzo dzakakodzera kuti dziitwe pachiteshi chepedyo chehutsanana uye chepachirwere. Kana zvikazoitika kuti yedu tap mvura ine mhando yepamusoro, kunwa matsime emvura anogona kushandiswa.
izvi vanonwa doro inozivikanwawo seyembiya dzemvura, iri mudziyo unobvumidza kushandiswa kwemvura yakachena, inotonhorera pasina basa remidziyo. Mvura yakachena uye ine hutano mvura inozovapo chero nguva, mukuwanda kwakakura uye kumunhu wese.
Inwa mvura spas Vanogona kushandiswa zvinobudirira muzvikoro, kindergartens, nzvimbo dzekushandira, mahofisi uye nedzimwe dzese nzvimbo dzeveruzhinji, uko vatengi nevashanyi, vadzidzi nevashandi vanowanzoda kupedza nyota yavo.
Kana uchisarudza iyo chaiyo yekunwa mvura tsime, iwe unofanirwa kutarisa kwete chete kutaridzika kwechigadzirwa, asiwo nekushanda kwayo.
Vakasununguka-vakamira vanonwa vachashanda zvakanyanya munzvimbo imwe, uye vanosungirirwa imwe mune imwe. Dzimwe nguva nzira yekutonhora kwemvura haina kudikanwa. Mamwe matsime emvura anonwa akagadzirirwa neipi yekuwedzera iyo inoita kuti zvive nyore kuzadza i.e. bhodhoro. Kunwa mvura masosi anogona activated ne tsoka tsoka, bhatani kana Photocell. Mamwe emacomputer akaiswawo mafirita emvura.
Mukana usina chokwadi chekunwa zvitubu zvemvura ndeye mukana wekuvabatanidza kune system yekudirwa kwemvura uye kushandisa mvura inoyerera, izvo zvinoita kuti dambudziko rekuzadza mabhodhoro emvura rinyangarika zvachose, uye kushandiswa kwacho kuri kwehutsanana uye kwezvemweya, pasina kushandisa makapu epurasitiki.
Chitubu chemvura chakagadzirwa na galvanized simbi, hupfu hwakakoshwa necheni ye-nickel-plated yendarira.
Iko kumberi / kumashure mahwendefa akagadzirwa corten simbi kana poda yakasungwa simbi kana isina chinhu. Iyo kabati yakagadzirwa nesimbi yakarongedzwa.
Kunwa matsime kunouyawo kwakazara neyetsika laser cut logo.
zvemazuva ano maitiro mune zvekuvakisa vanomanikidza vanogadzira matsime emvura yekunwa kuti vaite zvirongwa zvakashandisirwa maitiro akajairika uye vachishandisa zvoga zvigadzirwa uye dhizaini yemazuva ano muzvigadzirwa zvavo. Iyo inopihwa inosanganisira zvese zvigadzirwa zvine classic zvigadzirwa pamwe neiyo minimalist fomu.
Inonwa mvura spas zvakare yakatsaurirwa kunzvimbo dzakaita sepaki, nzvimbo dzekutamba neminda.
nhasi zvitubu zvebindu Nekudaro, ivo vanogona kubudirira kuzadzisa kwete chete kwekunakisa mabasa, kushongedza nzvimbo, asi vanokwanisa kupawo yemhando yepamusoro yekumwa mvura.
Dzimwe mhando vanonwa doro zvakagadzirirwa zvakare mhuka.
Iko kunwa mvura spas kunobatsira kutarisira zvakasikwa nharaunda nekudzora huwandu hwemarara anogadzirwa kana uchinwa mvura yemumabhodhoro kana kana uchishandisa makapu epurasitiki.
Iyo mvura yekunwa zvitubu pane inopihwa yakanakira mukati nekushandisa kwekunze. Midziyo yacho inogadzirwa zvemhando yepamusoro zvemhando yepamusoro uye kuvaka kwavo kunobvumidza kushandiswa kwakanaka, hutsanana uye kugadzikana.
Mimwe michina inokubvumidza kuti uwane mvura pamhepo tembiricha, kuchitonhora, kabhoni uye zvakare kunopisa. Iyo mhinduro yakakodzera yevashandirwi vanogona kupa vashandi nyore nyore kuwana kwakachena kunwa mvura.
Pro-Yakadira mvura disenser. Cold, inopisa uye fizzy mvura. Ona zvimwe zvakawanda pano
Kunwa matsime emvura anoonekwa munzvimbo dzemadhorobha kunotendera kukurudzira mararamiro ezvisikwa uye kukudziridza mararamiro ane hutano, kunyanya kana zvasvika pakuita hutsanana nekugara uchishandisa mvura yakachena yekumwa.
Kunwa zvitubu zvemvura zvinoshanda, kurwisa kukuvadza uye nyore kushandisa.
Mamwe masosi emvura yekunwa anoshandiswa mukati mekunze nzvimbo anogona kushandiswa gore rese nekuda kwekushandiswa kwakasarudzika anti-freeze mavhavha.
Matsime emvura ekunwa emazuva ano - zvitubu zviri nyore kushandisa zvekuti vana nevakuru vanogona kuzvishandisa nyore, zvakare nekuda kwekugadziriswa kweanomwiwa pakukwirira kwemunhu anoshandisa chishandiso.
5 / 5 ( 26 mavhoti )
mvura yemvura accessorieskongiri yetsime bindukuvakwa kweiyo sosikunyangwe mvura yemupopu inogonakunyangwe mvura kubva kunobva hutanoSefa yeanonwagadheni remuchadenga tsimetsime remundakongiri yetsime bindubindu rechitubu chebindutsime remunda wevanatsime rakakura remundabindu tsime magadzirirwodombo retsime tsimetsime diki remundatsime razvino bindutsime rakasimwa bindugadzira chitubu chebindukudhirowa tsime remundabindu remadziro chitubutsime girini tsimedombo retsime tsimefaucet yemunhu anonwatsime rebinduvanonwa gutamatsime emuguta akarwamini bindu chitubutsime razvino bindupitnikizvirongo zvemvuravanonwa dorozvinwiwa zvevanazvinwiwa zvevana muzvikorovanonwa vanhuvanonwa imbwavanonwa zvikorokuvhara vanonwavanonwa mumapakichinwiwa warawzvinodzosera mvurasosi yegadheni tsimeMvura inokwanisakunwa zviyero zvemvurakunwa mvura muPolandkumwa mvura warawkumwa mvura zvinodiwamvura kubva kutsimemvura iri kudonha kubva kune anomwamatsime emvuraekunze tap mvurakumwa mvura spaschitubuChitubu chemvura yekumwabindu zvitubumatsime mubinduchitubu muzvikoromatsime emvuratsime remvura yekunwakumwa mvura yemutengo mutengokunwa mvura chitubu muzvikoro